Abantu - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Umlayezo ovela ku-CEO
Ukuthembeka 、 ukukhiqiza kanye nokwenza izinto ezintsha kuyizici ezisemqoka zebhizinisi lomhlaba jikelele namuhla. Inhloso yenkampani yethu ukukhomba ukuhlangabezana nalezi zidingo.
I-XY Tower Co., Ltd. yatholakala ngonyaka ka-2008 ngenkathi iyinkampani yokuqalisa. Ngaphansi kobuholi bokuphathwa nokuzikhandla kwabo bonke abasebenzi, iXY Tower manje isungule umkhiqizi wombhoshongo osezingeni eliphezulu kanye nenye yezinkampani ezinkulu kakhulu zale mboni entshonalanga yeChina.
I-XY Tower inikeza "isitolo esisodwa" sokuhweba ibhizinisi lezinto zikagesi, ukwakhiwa kombhoshongo nokwakhiwa kombhoshongo.
ngokusekelwa kwabaphathi abanolwazi nonjiniyela abangochwepheshe, iXY Tower ukuhlinzeka ngemikhiqizo nokuncintisana namakhasimende ethu. I-XY Tower inazo zonke izici; ubuchwepheshe, izinhlelo zokuphatha, abantu namandla ezemali ukuze babe ngumhlinzeki wesevisi ohamba phambili eChina nakwamanye amazwe.
Sineqembu eliqeqeshiwe nelithembekile. Sinolwazi oluningi lokuhlangabezana nezidingo zamakhasimende. Futhi sinokuzethemba ukwenza isisombululo esihle kakhulu futhi siqinisekisa ukuthi izixazululo zethu zisebenza ngokugcwele, zisebenza kahle futhi zihlala ziguquguquka ngaso sonke isikhathi.
Abaphathi bethu banesipiliyoni sokusebenza seminyaka engama-30 kule mboni futhi bayajabula ngamathuba ebhizinisi akhona emakethe.
Kuyangijabulisa ukubona izinhlelo zokuphatha ezivuthayo, abasebenzi abanomdlandla abanobungani kanye nethimba eliqeqeshiwe ukuhlangabezana nezidingo zamanje nezesikhathi esizayo zebhizinisi. Manje sekungamakhasimende ethu ahlonishwayo ukuthi anqume, ukuthi i-XY Tower iphumelele kangakanani ukuhlangabezana noma ukweqa okulindelwe futhi isivuza ngempendulo ethembekile yokubenzela kangcono.
Ngithemba ngobuqotho ukuthi ngamakhasimende ethu amasha futhi ajwayelekile, ake sakhe ikusasa elingcono ndawonye!
UChunjian Shu (Usihlalo webhodi)
UMnu Shu ungunjiniyela omkhulu kagesi onesipiliyoni seminyaka engama-40 embonini kagesi. Ube nesipiliyoni seminyaka engama-20 esebenza emnyangweni wezinsiza zamanzi nogesi kuhulumeni wesifundazwe saseSichuan wabe eseqala futhi ephethe ibhizinisi eliphumelele kakhulu embonini kagesi neyezokuxhumana.
UMnu Shu unomsebenzi ophumelele kakhulu emkhakheni kahulumeni nokuphatha ukuthuthukiswa kwamabhizinisi. Ukhombisile ubuholi bakhe futhi unengqondo enhle kakhulu ngaphakathi kuye.
UMnu Shu ubambe elikhulu iqhaza ekuthuthukiseni abanentshisekelo futhi abanamakhono
iqembu lochwepheshe. Ungumholi webhizinisi osebenzayo futhi usebenzise imibono eminingi emisha ekwakheni amasethingi kagesi.UMnu Shu unethemba eliqondile futhi ukholelwa ekusebenzeni kanzima. Uzinikela ekwakheni ukubaluleka kwamasheya nomphakathi.
Yong Lee (Imenenja Jikelele)
Mnu lee, owenza iziqu ekwelashweni kwensimbi e-Hebei University of Science & Technology.
UMnu Lee waqala umsebenzi wakhe e-Bureau of Geological Prospecting eningizimu-ntshonalanga yeChina ngawo-1980. Ngemuva kwalokho wayesebenzele umkhiqizi wombhoshongo ongaphansi kukahulumeni owayenabasebenzi abangama-700 iminyaka engama-20.
UMnu Lee unolwazi olunothile kakhulu lokusebenza nezinhlangano ezahlukahlukene ezibandakanya umkhakha kahulumeni, amabhizinisi kahulumeni kanye nezinkampani ezizimele. Unerekhodi eliqinisekisiwe lokuphatha ngempumelelo inkampani enkulu yokukhiqiza.
Njengomholi, ikhono lakhe lokuhlela iqembu lothando elihlanganiswe kahle elihambisana nombono wakhe lenze ukuba inkampani ithole isikhundla esincomekayo ezweni.
UMnu Lee ungungoti embonini eshubile eshisayo enedumela eningizimu-ntshonalanga yeChina. Unekhono ekubhekaneni nokwelashwa kombhoshongo okukhethekile endaweni ephakeme yokugqwala.
WU-illard Yue Shu (Umqondisi webhizinisi laphesheya kwezilwandle)
UMnu Shu uthole iziqu zakhe zobuphathi ngezezimali zamazwe aphesheya e-University of Glasgow, eBrithani. Uneminyaka eyishumi yokusebenza okuqhubekayo emsebenzini we-Capital Institution. Uphethe izindaba zeNkampani yezeziMali, ezeMithombo Yabasebenzi nezaphesheya kwezamabhizinisi. Unomdlandla omkhulu ekuqhubekeni kwenkampani kanye nobuchwepheshe obusha.
Uqonda kahle ngamasu okuphatha amabhizinisi anamuhla futhi unezandla ezicebile kokuhlangenwe nakho emkhakheni wokulinganiswa kwezindleko, ukuhlelwa kwamaphrojekthi, kanye nokutshalwa kwezimali okuqala kwe-hi-tech. Unekhono elivelele lokuhola iqembu futhi ahambise insizakalo edlula okulindelwe yikhasimende.
Uphinde wahola phambili nomzamo wokusungula ibhizinisi laphesheya kule nkampani. Ubuholi bakhe obunamandla nombono obanzi womhlaba wonke kuzoholela ekutheni inkampani ikhulise ama-horizons ayo ngaphezu kwemingcele yasekhaya.
Injiniyela omkhulu wephrojekthi, onolwazi lweminyaka engu-20 yemibhoshongo yensimbi, uchwepheshe owaziwayo ikakhulukazi emkhakheni wombhoshongo wokudlulisela insimbi yengelosi. Ithimba lonjiniyela linabantu abangu-6, ngamunye aneminyaka engu-5-20 yokuhlangenwe nakho komsebenzi. Abanye onjiniyela banekhono emibhoshongweni yokudlulisa kanti abanye banekhono emibhoshongweni yokuxhumana. Bonke onjiniyela bazozama ukuthola isisombululo esiphelele sephrojekthi ngayinye ngolwazi lwabo olukhulu.
Umphathi wokukhiqiza, onolwazi lweminyaka engu-16 lokukhiqiza umbhoshongo, obhekele ukuphathwa kokukhiqizwa kombhoshongo kusuka ezintweni ezingavuthiwe kuya emikhiqizweni eqediwe. Kunabantu abangu-115 eqenjini lokukhiqiza futhi kuzokhiqizwa amathani ayi-30,000 wezinsimbi ngonyaka.
Hot idiphu galvanizing umphathi, oye wahlanganyela embonini galvanizing iminyaka engu-25, ikakhulu obangela galvanizing izinhlobo steel izinto, okuholela iqembu labantu 30, abanolwazi ocebile ukuqinisekisa izinga HDG.
Unjiniyela omkhulu wemidwebo yokuphakamisa, ngeminyaka eyi-11 yesipiliyoni somsebenzi wokuphakamisa. Iqembu lonke lingabantu abayi-5, ngamunye uchitha izinsuku ezi-3-5 ukuqeda ukufaka umdwebo wombhoshongo wohlobo olulodwa.
Umhloli wezinto ezibonakalayo, kunabantu aba-5 ethimbeni lokuhlola impahla, wonke umuntu unesitifiketi “sesitifiketi sokufaneleka sabasebenzi abahlola izinto zokwakha”, Bazoqinisekisa ukuthi izinga lokuphasa lomkhiqizo likhulu noma lilingana no-99.6%, futhi iphasi lasembonini isilinganiso singu-100%.
I-Sales Rep, uShirley Song ukuthengisa okunobungane, okunesineke, kanye nobungcweti, obesebenza eXY Towers iminyaka engaphezu kwengu-10 futhi wazi kahle umbhoshongo wensimbi.
U-Sales Rep, intombazane eyazisa kakhulu ikhasimende futhi uyaziqhenya kakhulu ngaye ngokuthengisa, onentshisekelo enkulu emibhoshongweni yensimbi, unethemba lokunikeza isisombululo esihle kakhulu kumthengi ngamunye.
UZhonghai He iNhloko yoMnyango Wezokulawulwa Kwezimpahla
Ubenesibopho sokuphathwa kwempahla ekhaya nakwamanye amazwe iminyaka eyi-12 eXY Tower. Ngubani owazi kahle ukusatshalaliswa nokuthunyelwa kweziqukathi namachweba ahambelana nezinhlobo zethu zemikhiqizo.